विद्युत् विक्री आम्दानी बढेसँगै युनाइटेड इदी मर्दीको नाफा १९४% बढ्यो | आर्थिक अभियान
विद्युत् विक्री आम्दानी बढेसँगै युनाइटेड इदी मर्दीको नाफा १९४% बढ्यो
वैशाख २९, काठमाडौं । युनाइटेड इदी मर्दी एण्ड आरिब हाइड्रोपावर लिमिटेडले चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण बिहीवार सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त वित्तीय विवरण कम्पनीको खुद नाफा गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा १९४ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । कम्पनीले गत आवमा रू. १ करोड ७९ लाख नाफा कमाएकोमा चालू आवमा बढेर रू. ५ करोड २७ लाख पुगेको हो ।
चालू आवमा कम्पनीको विद्युत् विक्री आम्दानीमा वृद्धि भएसँगै नाफा बढ्न टेवा पुगेको हो । विद्युत् विक्री आम्दानी गत आवको तुलनामा चालू आवमा ४८ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । गत आवमा कम्पनीले विद्युत् विक्री बापत रू. १० करोड ६ लाख आम्दानी भएकोमा चालू आवमा बढेर रू. १४ करोड ९० लाख पुगेको हो ।
त्यसैगरी कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ४२ करोड रहेको छ भने चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले जगेडामा रू. ५ करोड ३५ लाख सञ्चित गरेको छ । सो अवधिमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १६ दशमलव ७६, मूल्य आम्दानी अनुपात ५६ दशमलव ५६ गुणा र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ११२ दशमलव ५७ रहेको छ ।